Dhagayso:-Maxay Norway ku badalatay xushmad umuujinta Basaboor Somaliga? – Idil News
Dhagayso:-Maxay Norway ku badalatay xushmad umuujinta Basaboor Somaliga?
Posted By: Idil News Staff July 13, 2018
Dhanka kale waxaa iyaguna ka hadlay Mas’uuliyiinta dawladda Fadaraalka Soomaaliyawaxayna sheegeen in dawladda Norway ay aqoonsatay baasaboorka Soomaaliga ayna bilaabayso inay kusoo saarto fiisooyinka dalku galka waddankaas.
Sidoo kale warar hoose oo aan ka helayno ilo lagu kalsoonaan karo,ayaa tibaaxaya in Dowlada Norway aqoonsiga ay siinayso Basaboor Somaliga ay ku badalanayso arimo ay ka mid yihiin galgal dhow oo ay uyeelato arimaha shidaalka Somaliya iyo soo celinta qaxootiga Somalida ee dalkaas ku nool.
Ra’isalwasaare Khayre oo ka mid ahaa Somalidii uqaxday dalkaas xiligii burburka,isla markaana haysta dhalashada dalkaas,ayaa aad loogu xantaa xiriir dhow oo kala dhaxeeya shirkadaha shidaalka Norway iyo sirdoonka dalkaas dadka sida dhow ula socda siyaasada Somaliya tilmaamyaan in Khayre soo galidisii siyaasada ay daba ka riixayeen shirkadahaas iyo hay’adahaas sirdoon.
Haddaba arrintan ayaa Haaruun Macruuf uu ka waraystay Agaaismaha laanta socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya Maxamed Aadan Koofi.
Halkan ka dhagayso codka Agaasimaha